Times Of Nepali » “डलर खाएर रवि लामिछानेको पक्षमा आन्दोलन, समयमै सरकारको ध्यान जाओस्” [भिडियो सहित]
“डलर खाएर रवि लामिछानेको पक्षमा आन्दोलन, समयमै सरकारको ध्यान जाओस्” [भिडियो सहित]
काठमाडौँ – पत्रकार शालिकराम पुडासैनी प्रकरण पछि पक्राउ परेका टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेको पक्षमा भैरहेको आन्दोलन गर्नेहरुले डलर खाएको एक सांसदले आरोप लगाएका छन्।
बुधबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद खेमकुमार विकले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। रविको पक्षमा भइरहेको आन्दोलनका पछाडि कुन शक्ति छ ? भन्ने उनको प्रश्न छ।
आन्दोलन डलर खाएर भइरहेको आन्दोलन प्रति सरकारले ध्यान दिनु पर्ने उनले माग गरे।
“सरकाले कानुन कार्यान्वयन गर्दा त्यसको नाममा कम्युनिष्टको विरोध गर्दै वर्तमान प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहनसम्म भयो”, उनले भने, “रविको पक्षमा भइरहेको यो आन्दोलनका पछाडि कुन शक्ति छ? यो आन्दोलन डलर खाएर भइरहेको छ। सरकारको ध्यान यसमा जानुपर्छ, यसको छानबिन हुनुपर्छ।”
रवि लामिछानेको पक्षमा गणतन्त्र र व्यवस्थाविरोधीहरुले आन्दोलन गरिरहेको उनको दावी छ। रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित जुलुस, धर्ना बाट देशमा हिंसा भड्काउन खोजिएको भन्दै उनले त्यस तर्फ सचेत हुने सरकारलाई विकले आग्रह गरे।
“रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित जुलुस, धर्ना देशका केही ठाउँमा भइरहेको छ। जसमार्फत् हिंसा भड्काउने कोशिश हुँदैछ।”,उनले थपे,”हिजै (मंगलबार) पनि काठमाडौँको माइतीघरबाट निस्केको जुलुसमा शंकास्पद पदार्थ (पेट्रोल?) भरिएका वियरका बोत्तल बोकेर हिँडेको देखेँ। त्यसपछि मैले तत्कालै प्रहरीका कमाण्डरलाई खबर गरेँ। त्यसपछि सम्भावित हिंसात्मक घटना टर्यो।”
प्रकाशित मिति ४ भाद्र २०७६, बुधबार १९:४३
Breaking news: काठमाडौं आउदै गरेको यात्रुबाहक बसमा आ*गलागी
भिडियोमा हेर्नुहोस्, ज्यानको बाजी थापेर विषालु सर्पसँग खेल्ने नेपाली युवा, सजिलैसँग यसरी समात्छन् सर्प
हास्य कलाकार हरिवंश आचार्य परिवार सहित ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’मा / हेर्नुहोस् भिडियो
नेपाल राष्ट्र बैंकले दसैँका लागि १४ गते देखि नयाँ नोट वितरण गर्ने कुन बैंकमा कहाँबाट कति पाइन्छ ?
भर्खरै आयो अत्यन्तै दु*खद खबर दुई दिनदेखि हराइरहेकी ६ वर्षिया बालिक मृ*तावस्थामा भेटिइन्
नेपालबाट शुरु गरी साउदी अरेबिया उत्तर दिंदा बालाजीले जिते साँढे १२ लाख
ब्रेकिङ्ग: प्रधानमन्त्रीबाट ओलीले राजिनामा, नयाँ प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड
भ्रष्टचारीलाई थु*न्न ठूलाठूला हल बनाउन तयार छौँ : मन्त्री पण्डित
विप्लव ‘क्रान्तिकारी’ ले भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध यसरी उडाई’दियो / भिडियो हेरौ।।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काङ्ग्रेस माथी दिए एस्तो जवाफ
Breaking-चितवन अदालतमा थुनछेक बहस सकियो, आजै फैसला हुने